5 Tilmaamood oo aad si guul leh ugu beddesho rajadaada internetka ee macaamiil | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 25, 2014 Khamiista, Sebtember 25, 2014 Douglas Karr
Waxaan wadaagnay sida cajiibka ah Cusbooneysii abka shalay ahayd. Waxaan ka ogaaday iyaga markaan helay xogtan si aan ula wadaago, Sida loo Xidho Lead Lead. Safarka ay ku sharraxayaan emaylka asal ahaan wuu bilaabmaa ka dib ka leedhka waxaa lagu qabtaa suuq geyn.
5ta Talooyin ee lagu Xidho Ledhka
Adeegso CRM - Dabcan, waa inaad meel ku haysataa duub hogaaminta, soo qabso macluumaad dheeri ah oo iyaga ku saabsan, kala mudnaanta iyaga, oo ka shaqee sidii ugu dhow. Maamulka Xiriirka Macaamiisha nidaamyada waxaa loogu talagalay helitaanka, haynta iyo waxqabadyada kacdoonka iyadoo la ururinaayo xogta bakhaar dhexe oo ku saabsan macaamiisha. Haddii kooxdaada iibku ay nasiib leedahay, waxay adeegsanayaan a nidaamka maaraynta habka iibka la safan. Salesvue waa macaamiil.
Noqo Mid Laheli Karo Aqoonna Leh - Waqtiga falcelintu waa muhiim iyo inta ugu badan ee hogaamiyayaashu horeyba way kuu yimaadeen ka dib markii ay baaritaan ku sameeyeen alaabadaada iyo adeegyadaada khadka tooska ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in kooxdaada iibku ay diyaar u tahay inay si dhakhso leh oo dhammaystiran uga jawaabto su'aalaha la filayo - haddii kale waxaad waayi kartaa iibka.
Raadi Goob Guud - Baro rajadaada si ay kaaga caawiso inaad shakhsiyeeysid habka iibka. The Cusbooneysiinta arjiga waxaa si gaar ah loogu dhisay tan! Sidoo kale, haddii aad heshay xal otomaatig ah oo suuqgeyn weyn oo dhaliyay isla markaana aruurinaya macluumaad ku saabsan dabeecadda hoggaamintaada - runti waxaad siin kartaa dadkaaga iibiya sirdoonka ay u baahan yihiin si ay u shakhsiyeeyaan una xiraan hoggaanka si fudud.
La kulan fool-ka-fool - In kasta oo ballanqaadyo waaweyni ay badanaa u baahan yihiin tan, anigu sidaas ugama iibin. Waxaan ka xirnay ganacsi aad u balaaran oo aad u balaaran webka kullamada fool-ka-foolna looma baahneyn webinars iyo webmeetings. ReadyTalk waa macmiil. Waxay u badan tahay inay fududahay in la xiro fool-ka-fool si aad u dhisi karto aaminaad ka fudud, laakiin weli lama huraanka u tahay da'da internetka.
Gorgortan iyo Dabagal - Waxaa laga yaabaa in tallaabo la waayo ka hor, tanina waa in la garto dhibcaha xanuunka ee macaamilka oo la go'aamiyo miisaaniyadda si aad shakhsi ahaan ugu soo jeediso soo-jeedinta. Gorgortan badan kama geysanno… waxaan ogaaneynaa waxa macmiilkeennu u baahan yahay oo aan go'aansanno haddii aan ku dhammaysan karno caqabadaha miisaaniyaddooda iyo in kale. Kadib waxaan dejinay rajooyin sida aan ugu guuleysan karno.
Nasiib darrose, xog-ururinta ayaa tilmaamaysa in ku dhow kala badh dadka iibiya waligood dabagal kuma hayaan leh horseed. Taasi waa kiniin adag oo loo liqo kooxda suuq-geynta maadaama ay aad ugu dadaalayaan wadista gawaarida!
Tags: xidho hogaanxidho iibxir iibintaCRMmaamulka xiriirka macaamiishasida loosida loo xiro hogaanka iibkaLeadjiilka ledrajooyin